Dọọ ọchịchị onye kwuo uche ya ụzọ mkpirisi site na mkpọchi na mgbake nke akụ na ụba: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 15 Ka 2020	• 24 Comments
isi mmalite: fvvd.nl
Ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ihe ngwọta sitere na nsogbu dị ugbu a nke gọọmentị Dutch wakporo mba anyị. Ọ bụ ụdị ochichi onye kwuo uche ya nke ndị mmadụ ji ahọpụta ndị nnọchi anya ha site na ntuli aka n'ịntanetị (echekwara). Ndi mmadu na - ahighazi ndi ghazigharị na ndi nwere ntuzi aka. Onye nwere ọtụtụ ntuli aka na-enweta ọkwa onye ozi. Otu maka praịm minista.
A gha ghazigharị ma gosipụtara ya ndị mmadụ n'ụzọ doro anya okwu nkenke maka ịnabata ma ọ bụ ịnabata ya. A na-enye ụbọchị mmebi iwu ma enwere ike ịmebe ya ma ọ bụ emegha ọzọ na akpaghị aka mgbe ụbọchị ahụ ga-agwụ. Ezigbo iwu ka dị. Ajọ iwu na-apụ n'anya.
Nwere ike iru ọchịchị onye kwuo uche ya ebe gọọmentị dị ugbu a. Ọ bụ ụdị mmegide nke amamihe nwere ike ịghọ ihe ozugbo. Mgbanwe dị nwayọ na ngwa ngwa. Do naghị eche ntuli aka, mana hazie ntuli aka gị na ntanetị.
Ọ nwere ike bụrụ ihe a na-eme ozugbo, maka ị na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ghara ịdị, mana dochie ndị isi site na ntuli aka ntanetị. Ndị na-achịkwa ndị mmadụ dochiri ụmụ nkpu nke okpueze ahụ.
Usoro ntuli aka nke na-eweta nchekwa na nke nwere ike ịchịkwa ntuli aka nke onye chọrọ. Ọ ga-akacha mma ịme nke a site na blockchain ma ọ bụ site na iji jikọta DigiD gị, mana n'ihi na anyị ekwesịghị ịtụ anya ka gọọmentị dị n'okpuru aka na-emekọrịta ihe, anyị nwere ike ịhazi nke a n'onwe anyị. FVVD enyelarị ikpo okwu maka nke a (www.fvvd.nl).
Akwụkwọ ozi dị n’okpuru na-akọwa ya n’ụzọ zuru ezu ma bụrụ mkpụrụedemede silịlị nke ị nwere ike izipu ozugbo na ndị enyi gị ma ọ bụ ndị gị na ha maara:
Na nkenke banyere gọọmentị ugbu a na "mkpọchi amamihe" anyị kwuru banyere ya.
Nke nta nke nta, na mpaghara m, ọtụtụ ndị mmadụ na-amalite ịhụ na gọọmentị chọrọ ịgbanwe ọha mmadụ n'ozuzu. “Igwe ngbachi obi” ahu ga - eji nwayọ gbanwee ka ọ bụrụ nke na - adịgide adịgide, ebe ị ga - azụrịrị nnwere onwe gị. Ihe ohuru ohuru ghuru ihe dika otu ocha na ọkara nke ndi mmadu ma ikwusi gi. Ike gwụrụ m nke ahụ.
Gee ntị, ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe ndị na-ahụ maka ndị dị oke ọnụ ka ha nweta ndụmọdụ gbasara otu esi edobe azụmaahịa ha na ụkwụ isii. Nzọ na e nwere mkpado ọnụahịa dabara na; mkpado ọnụahịa maka ụlọ ọrụ (n'ihi na ọ ga-achọ nkwenye gọọmentị maka usoro 1,5-mita) yana akara ọnụahịa maka onye ahịa (n'ihi na mmadụ ga-ata ụta maka mmachi ahụ na ọkara na ọkara na mbulata ego).
O yikarịrị ka ọgwụ mgbochi covid-19 nke na-abịanụ ga-abụ naanị iwu. Kedu ihe ị chere maka nke ahụ?
Kedu ihe ị chere ... Ewezuga ajụjụ a ka anwalela ọgwụ dị otú a nke ọma ma ọ bụ na ọ kwadoghị, wee dozie ajụjụ ahụ ma anyị chọrọ ngwaọrụ ahụ na ọkara mita site na otu. Echere m na Rutte siri ike na ha anaghị ege ntị na mkpesa ndị mmadụ na ebe ahụ na Hague.
Amaghị m ihe ị chere maka ya, mana aga-eji teknụzụ nyochaa ndị ahụ. Teknụzụ ahụ na nnukwu data ga-abịa, n'ihi na enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịnweta ụdị ọzọ na-atọ ụtọ. Ka ị na-ahụ ya dị iche? Echere m na ọtụtụ ndị arụ ọrụlarị maka nnukwu ụlọ ọrụ na-enye ICT ngwọta ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ gọọmentị na-ahụ na ha nwere ike ịnọgide na-akwụ ụgwọ ụlọ ha ma na-elekọta ezinụlọ ha. Ndị ahụ nwere ike ịhụ na ihe adịghị mma, ma a bịa n'ịhọrọ, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ụlọ nke ha na ubi ha.
Mụ na gị maara nke ọma na obodo ọhụrụ a ga-adị. Lọ ọrụ mgbasa ozi na steeti na-ekwenye na ire ere dị mkpa na ụzọ e si webata ya bụ nzọụkwụ site na nzọụkwụ, nke mere na ndị mmadụ nọgidere na-ekwenye na ọ dị mkpa n'ezie ịnwe nje corona. Ọ naghị eme m obi ụtọ.
Ọ bụ gị kwuru onye ahụ? Na usoro ahụ ga-aga n'ihu na mmegharị nke ebili mmiri site na 'ijikọ eriri ahụ' ruo 'ka ikwe ka mmiri mee ka mmiri na-abịa. Mgbe oge nke ejiri otu mita na ọkara na obere ohere maka ịmegharị, usoro mgbasa ozi, ndị ọkachamara (mmepụta ihe ọgụgụ RIVM) na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-egosi anyị mmaliteghachi nke nje corona, mgbe nke a gasịrị iwebata akụkụ ọzọ nke Ndị mmadụ ga-anabata ngwugwu.
Ọ dị mma, echetaghị m ma ikwuru ihe a, mana ọtụtụ ndị mmadụ na - achọpụta ihe gbasara otu esi egwu anyị (ewezuga akụkọ adịgboroja niile). Anyị nwere ike ịchọpụta ọtụtụ gbasara etu ịgba ọgwụ mgbochi dịruru njọ, otu Microsoft onye ọka iwu Microsoft chọrọ inye anyị akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi dijitalụ, etu Bill Gates si tinye ego na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi, otu esi eji ngwa nwere ike iji nyochaa anyị. Echere m na a na-akwali anyị ngwa ngwa na usoro nchịkwa dijitalụ. Echere m na ozi ahụ dị oke mkpa, n'ihi na ọ bụrụ na ịmaghị ihe ọghọm na-abịakwasị gị, ị gaghị amaba na oge. Agbanyeghị, a ga-enwerịrị usoro ọzọ. Anyị ga-abịa mepụta azịza.
Echere m na ọ bụrụ na mụ na gị anaghị eme ihe ọ bụla, anyị ga-akwaga n'obodo ebe enweghị ego ọzọ, ọha mmadụ ebe ngwa ọdịnala, igwefoto na nnukwu data mara kpọmkwem ebe anyị nọ ma ọ bụ ma anyị nwere ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ekwesị (enweghị covid-19) na onye anyị na ya na-emekọ ihe. Nzọụkwụ ọzọ bụ ijikọ data a niile na ụdị akara akara. Anaghị m eche nke ahụ, ọ bụ m? Iji ma ọ bụ na-enweghị akara zuru oke, ịnwere ike ma ọ bụ ịpụ n'èzí, site na ụgbọ oloko ma ọ bụ n'ụgbọ elu ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Nke ahụ ga-abụ ụlọ ọgbụgba! Njikọ nke data ahụ niile na akara dijitalụ nwere ike ime na njikọta na njiri akụ akụ dijitalụ a bụ nnukwu ihe ọchị. Kinddị ụlọ mkpọrọ na-emeghe.
Echere m na a na-achịkwa anyị n'ime web, China na-enyekwa ihe atụ nke otu ị ga - esi manye ndị mmadụ ịrapara na ya. Achọghị m ibi na China. China gosikwara otu esi ahapụ onye na-emegide ya. Nke ahụ bụ mmetụta akpaghị aka nke ụdị sistemụ a. Ka ị na-ahụ ya dị iche? Na mmechi, ọha mmadụ ga-akpọ isiala nye ya ọzọ, n'ihi na ọtụtụ n'ime ọha mmadụ na - arụ ọrụ maka akụkụ nke 'sistemụ'. Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ na IT ma ị na-eweta ngwanrọ nchekwa data ma ọ bụ na-enye sistemụ igwefoto, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ dị ka onye ọrụ nyocha ma ọ bụ dịka onye uwe ojii, ị ka ga-ahọrọ ego ị na-enweta. Nke ahụ bụ ka ọ na-aga.
N’oge na-adịbeghị anya, mmadụ kwuru, sị: “Mgbe ahụ, m tụfuru ekwe ntị m ka m pụọ na sistemụ ahụ”. Mana anyị na-aga oge ebe isonye na ọha mmadụ ga - abụ ihe na - agaghị ekwe omume na - enweghị digiD ma ọ bụ na - enweghị eHerkenning (maka ụlọ ọrụ). Nke ahụ bụrịrị ikpe. Otu a ga - eme na teknụzụ corona ọhụụ. Ọ bụrụ na ịtụfu smartphone gị, ị gaghị enwe ike ịbanye na nnukwu ụlọ ahịa. Mgbe ahụ ị bụ naanị spool.
Think chere na ọ ga-abịara nke ahụ? Echere m na… Mgbe ahụ ị ga - anọrịrị naanị ma ọ bụrụ na ịnwee ogige nke gị, mana ị ga - enwetakwa mkpụrụ nke gị, n'ihi na ịjụta afọ ojuju ahụ ga - amachibido iwu ogologo oge. Ọ dị mma, amaghị m banyere gị, mana enweghị m oge maka nke ahụ ma enweghị m mmetụta dịka ya.
Echere m na nzọụkwụ ọzọ ga-abụ na ịghara ịnọ na mpaghara ọha ma ọ bụrụ na ịnweghị ọgwụ mgbochi. Na “nnukwu data” ga-ekerekwa òkè na nke a. Ọ bụrụ na ụdị ngwa ahụ mechara kwuo na inwetara ọgwụ mgbochi, nnukwu ọnụ ụzọ mbata ga-ahapụ gị ka ị banye; ma ọ bụghị. Na oge ikpeazu, enwere ike dochie ụdị ngwa a site na njirimara dijitalụ nke jikọtara ahụ gị ma ọ bụ ihe. Amaghị m, ị nụrụ na Microsoft na-arụ ọrụ na patent ma ọ bụ ihe (abụghị izu nzuzo, agụrụ m na saịtị patent Google). Ọ ga-ezu ezu ma ọ bụrụ na ha na-ejikọ ego nke akụ gị na ihe a niile. Brrrr .. Agaghị enwe ụzọ mgbapụ ọ gwụla ma ị họọrọ ibi 'n'ime ọhịa', mana ọ dị mma ..
Anyị nwere ike na-eti mkpu ihe anyị chọrọ; anyị nwere ike be mkpu na anyị achọghị ya dum, mana ọ dị ka mkpu n'ọzara. Imirikiti na-adabere na 'sistemụ'. Echere m na oge eruola ka iche echiche: Ọ bụrụ na ịnweghị ike 'em, sonye' em.
Echere m na anyị ga-enwerịrị ezigbo ihe ngwọta nke ndị na - arụ ọrụ maka 'sistemụ' ahụ nwekwara ike ịnabata. Anyị ga-ewepụta usoro dị mfe ma bụrụ nke ga-ekwe omume nke ga - eme ka ndị mmadụ ghara ichebe ihe ụfọdụ, kama na ha nwere ihe ha kwuru. Anyị agbakwasị ụkwụ ugbu a na mkpebi siri ike si n'elu. Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ugbu a na-amanye anyị ịnakwere mkpebi ndị ahụ na-enweghị ụdị ikere òkè ọ bụla. Echere m na enwere ike ịme ya n'ụzọ dị iche. Nke ahụ chọrọ ịgbanwe ugbu a. Ọ na-ewe m iwe.
Agụrụ m banyere ohere iji teknụzụ otu teknụzụ were bụrụ ihe dị mfe n'oge a, na-enweghị nke a ịgbado ọha mmadụ dum elu. Ọ chọghị ngagharị iwe ma ọ bụ ngagharị iwe. Onye ọ bụla nwere ike na-eme ihe ha na-eme. Ọ ga-amasị m ịmata ihe ị chere maka nke ahụ, n'ihi na m na-enwe ekele maka echiche gị oge niile.
Naanị ihe na-agbanwe bụ usoro mkpebi. Ndị ozi na ndị isi na-akọ akụkọ banyere okpueze ahụ ma na-agbagha site na iwu na-enweghị nkwenye ndị mmadụ ozugbo ga-agarịrị ndị ahụ. Ndị nnọchi anya mmadụ ga - anọchi anya ndị ozi (ndị na - anọchite anya ndị mmadụ karịa okpueze). Ha kpọrọ ya ọchịchị onye kwuo uche ya. Nke ahụ bụ ọbụna Elon Musk (nke ụgbọala ndị ahụ Tesla) na-akwalite. Nke ahụ abụghị nwa nzuzu…
Ọ bụrụ na nke ahụ ga - ekwe omume site na usoro ochichi onye kwuo uche ya na ọ bụrụ na enwere ike ịme ya ngwa ngwa, echere m na anyị kwesịrị ịmalite ime nke ahụ ma kwalite ya. N'ụdị ọchịchị onye kwuo uche ya a, ndị mmadụ na-ahọpụta ndị nnọchi anya ndị mmadụ n'ịntanetị. Yabụ ị nwere ike bụrụ onye ntuli aka n'onwe gị ma ọ bụ tinye aka na ndị a na-eme ntuli aka ma usoro ịtụ vootu na-eme ka nhọrọ na uto na-akwado ya. Ihe dị ka usoro ntuli aka dị ka Holland Got Talent na mmemme TV ndị ọzọ. Teknụzụ dị ebe ahụ. Ihe m ghotara bu na enwere ike.
Yabụ na ndị nnọchi anya a họpụtara ahọpụta kwesịrị ime ka iwu dị mfe ma gosi ya ndị mmadụ maka ihu ọma ma ọ bụ nyocha. Site na puku kwuru iwu, rue ịdị ọcha, site na ịba ụba rue ogo. Direct ntinye ọha na eze. Eche m na nke ahụ ma ama.
Anyị nwere ike ichere ruo mgbe iwu ịgba ọgwụ mgbochi nyere anyị ikike ịhọrọ ịgwọ ọgwụ ma ọ bụ gaa n'ụlọ mkpọrọ dijitalụ ma ọ bụ anyị nwere ike ijide oge ahụ. Echere m na anyị kwesịrị iji nsogbu a mee ka mgbanwe ahụ mee. Gbanwee uzo anyi choro! Usoro ochichi onye kwuo uche ya nwere ike dochie usoro ikike dị ugbu a site na ntuli aka ntanetị n'ime ọnwa ole na ole. Ọ dị mma: N’ikpeazụ ihe dị mma kama echiche ndị ahụ niile na-esi n’ọkpụkpụ ọnụ na ịntanetị niile.
Achọrọ m nnọọ ịma ihe ị chere maka ya! Echere m na ugbu a bụ oge ịmepụta nkwado maka nke a. Ka anyị kwuo banyere nke ahụ. Anyị nwere ike iwulite ya dịka anyị niile mere Facebook buru ibu. Just na-eme nke ahụ site na ịkekọrịta ... na-akọwa ndị mmadụ gburugburu gị. Ọ bụ ya mere m ji chee na m ga-akpọtụrụ gị.
Lebagodị anya ebe a, akọwara ya nke ọma ebe ahụ: https://www.fvvd.nl/ ị ga - abịanye aka n’akwụkwọ ozugbo nke na-egosi na anyị chọrọ imekọ ihe ọnụ. Nke ahụ ga-abụrịrị viral ma ọ bụrụ na ị jụọ m.
Ehee, apụrụ m ịnụ ya n’aka gị.
(PS nwere ike ịbụ echiche: zigara ndị enyi anyị ndị ọzọ email a
Enwere ọtụtụ ajụjụ banyere otu usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị otú a ga-esi arụ ọrụ, mana isi bụ:
na enwere ike itinye ya ngwa ngwa
na ọ bụ ụdị kachasị mma nke ọchịchị onye kwuo uche ya
na ị nwere ike ịme ka usoro ego sikwuo ike
Enwere ike ịme nke ikpeazụ, dịka ọmụmaatụ, site na iwebata onye nrụpụta dijitalụ (na ikekwe akwụkwọ). Etu ụkpụrụ ahụ kpuchiri onye nrụbe ahụ mbelata nke ego ugbua igbochi. Njikọ ahụ na-etolite “ọkọlọtọ ọla edo” ọhụrụ. Nke ahụ nwere ike ịbụ ọla edo anụ ahụ ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ bitcoin. You nwere ike ịmepụta ngwa ngwa dijitalụ ngwa ngwa yana njikọta na bitcoin (dị ka “ọkọlọtọ ọla edo”). Ihe ndị a na - emetụta ihe niile: ndị mmadụ họọrọ.
Ihe ka ọtụtụ na-ekpebi! Nke ahụ bụkwa ịma mma nke ochichi onye kwuo uche ya. Direct onye kwuo uche ya agaghị enwe ike ugbu a tupu oge ahụ, n'ihi na ọ ga-ewe nnukwu oge. Site na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ, ị nwere ike inye ndị mmadụ ohere ikwu. Site na ngwa na pịa nke bọtịnụ, ị ga-eme ntuli aka maka onye ntuli aka ma jiri otu pịa bọtịnụ ị kwadoro ma ọ bụ jụ atụmatụ.
"Ee, mana nke ahụ agaghị ekwe omume, iwu siri ike maka nke ahụ, enwerekwa ọtụtụ iwu maka nke ahụ!Kpamkpam ma nke ahụ bụ ihe kwesịrị ịgbanwe. Ndị isi ọhụụ ga-enwerịrị ike ime ka ọ dị mfe, na-ekwurịta okwu nke ọma ma mee ka ndị mmadụ kwenye. Ihe ka ọtụtụ na-abụkarị mkpebi siri ike.
Ka ọ daba n'ime, chee maka ya, mana ahapụkwala ogologo oge. Anyị kwesịrị isi n'ọnọdụ a dị ugbu a pụọ ​​ma ọ dị mkpa ka anyị mee ka ndị na-achị anyị ugbu a pụọ ​​n'ụlọ ngwa ngwa. Gụkwuo na www.fvvd.nl ma jụọ ajụjụ gị n'okpuru 'ajụjụ & azịza'.
"..Ma ọ buru na i megharia ihe a, umu gi gha abu ozo"
isi mmalite foto: https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/
Tags: ije, ochichi onye kwuo uche, kpọmkwem, kpọmkwem, agba, Forum, fvvd. otu, mkpọchi, ọha mmadụ, ndị ozi, online, n'elu ikpo okwu, mgbanwe, ntuli aka
15 May 2020 na 15: 27
ANP: Poll: VVD tolitere n'oche iri anọ na asatọ site na ịbịaru corona
Ndị na-eme ntuli aka nwere obi ekele maka usoro uche gọọmentị, nke na-enye nkwado maka nnukwu mmekorita, VVD, dịka nyocha ọhụrụ nke I&O Research mere. Ndị otu na-emesapụ aka nwere ike ịtụkwasị oche iri anọ na asatọ, ebe ndị otu ndị ọzọ na-anọ n'okpuru oche iri na isii.
15 May 2020 na 15: 29
ANP John de Mol… nghoputa a pụrụ ịtụkwasị obi ma ọ bụ mgbasa echiche? Mgbe niile iji gosi na nke ahụ abụghị eziokwu.
15 May 2020 na 15: 42
usoro ịtụ vootu ekwesighi ịtụkwasị obi mgbe ha kwuru na oche iri anọ na atọ chere na ha nwere ike nweta ọnụọgụ oche na 43. Ọtụtụ ndị bi na Madurodam ka kwenyere na ntuli aka na igbe ntuli aka.
Enwere m ike ịgwa gị site na isi mmalite a pụrụ ịtụkwasị obi na enwere mperi igbe vootu na ọ dịghị mma karịa nkezi banana Republic. ANP sokwa na-agụta votu ahụ
"Mpaghara ndị obodo na-enyefe ọnụ ọgụgụ ngwa ngwa ka ANP (Algemeen Nederlands Persb Bureau). Dabere na ngụkọta ntuli aka ndị a, ndị NOS ga-eweta nsonaazụ mbụ n'uhuruchi nke ụbọchị ntuli aka. "
“Ndị isi ọchịchị na-agbakwunye nsonaazụ ntuli aka. Ha na-eme nke a dabere na akụkọ banyere saịtị nke ịtụ vootu. Ejikọtara nsonaazụ ya site na enyemaka nke akụrụngwa mgbako (ọkachasị Nkwado Ntuliaka Mmemme), na ndị otu na ndị otu.
15 May 2020 na 15: 55
Joseph Stalin - 'Ndị na-eme ntụli adịghị ekpebi ihe ọ bụla. Ndị na-agụ votu ahụ na-ekpebi ihe niile. '
15 May 2020 na 16: 07
Echere m na Mol ka bụ enyi ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala onye na-azụ ahịa Berlusconi. Freemasons n'etiti onwe ha, jikọtara ọnụ na ọdịnihu mara mma maka onwe ha na ụmụnne ha, ọ bụghị maka mmadụ.
16 May 2020 na 09: 10
Idd it benne kabbalists, Berlusconi bu onye amara na onye otu ndi PII obi ojoo. Otu ụlọ ahụ tinyere aka na ịhazi arụmọrụ ndị Gladio na ztali gburu ọtụtụ mmadụ n'okpuru "Red Brigades". Ha maara mgbe niile otu esi etinye ngwongwo nke ọma ma ree ndị a na-enyo enyo na mbụ.
16 May 2020 na 13: 51
Freemasonry Apụla Western Society
Ọtụtụ ndị na-ekpebi ọdịda anyanwụ dị mkpa, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọkachamara n'ihe banyere akụ na ụba, na ndị isi agha bụ ndị otu nke nzuzo nzuzo ma ọ bụ ndị otu ndị a na-emetụta ma na-ejikarị… Nke a bụ otu atumatu Setan nke zuru ụwa ọnụ nke anyị na-achọpụta na ụfọdụ ebe obibi Freemasonry, dị ka PII Lodge tinyere aka na ihe gbasara Calvi na intali na mmalite afọ asaa - nzuzo, mbipụta abụọ, ime ihe na-adịghị mma, nnabata, nrụrụ aka nke ndị isi na, ebe ọ dị mkpa, ọ dị ka ọ bụdị igbu ọchụ.
22 May 2020 na 14: 43
22 May 2020 na 17: 16
15 May 2020 na 19: 08
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ onye ndu nke otu buru ibu, ị na-eme nke ahụ n'enweghị mmasị ọ bụghị maka ego dijitalụ. Ozugbo ego batara, ihe na-aga adịghị mma. Gọọmentị dị ugbu a na-eme ka hà erughị ego, mana site na azụ azụ ọ bụ akụkọ dịtụ iche.
Inye ndị mmadụ ego n'efu agaghị enyere aka, ego na-enye ike ebe ha nọ. Dịka ụmụazụ na-eto eto, ha ga-eti mkpu karịa.
Ihe ọ bụla dị na mbara igwe a na - eto n'efu ma iwu nke okike bụ otu onye maka mmadụ niile. Otutu ndi mmadu na ndi isi ya ejiriwo iwu ego dochie iwu ndi a.
Onye obula n ’uwa a nwere ikike ikwe ma k’omuta ala. A ga-enwe nri ga-ezuru unu nke ukwuu, ọ dịghịkwa onye agụụ ga-agụ.
Onweghị oke ohia kwesiri igbutu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga mba ọzọ, ị na-eme nkwekọrịta iji gbanwere obere oge. Uto aku na uba bu ihe ojoo, uto nke aku na uba bu ihe ndi mmadu.
Ọ bụ n'ọdịmma onye ọ bụla ka nke a na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'ihi na anyị maara ihe ga-eme ma ọ bụrụ na anyị enyefee ya.
O gbasara ihe a mere tupu 😉
15 May 2020 na 20: 10
Echere m na nke a bụ echiche mara mma. Biko jiri obi gị niile kwado ya.
Nwere ajụjụ abụọ:
Enweghi ike itinye usoro a maka ochichi onye kwuo uche ya site na ntụgharị aka?
Oleekwa otu ị ga - esi jide n’aka na usoro ihe a nwere ike ịtụkwasị obi ma ghara idobe ya?
Anaghị m akwado ego dijitalụ ma ọ bụ ịgbakwunye digitization nke ọha n'ozuzu.
Ndi enwere ike itinye usoro a n 'ụzọ "analogous"?
16 May 2020 na 21: 57
Niile kwuru na bara uru kwuru na kwuru. Agbanyeghị, enwere mmeghachi omume ma ọ bụ leta ahụ dị ka edere n'isiokwu a ma edepụtaghachiri ma zigara ndị ọzọ akwụkwọ ozi ahụ? Ọ bụrụ na ịnwere aro ndị ọzọ, ma ọ bụ gbasara leta ahụ ma ọ bụ iji ruo ìgwè elekwasịrị anya, egbula oge ịkesa ya. Nke a bụ obere ọrụ, yana nje virus na-agbasa nke ukwuu, ozi a nwekwara ike gbasaa exponentially. Ọtụtụ mmeghachi omume na saịtị ndị ọzọ (nke a na-achịkwa) na-egosi na mmetụta uche nke ọtụtụ ndị chọrọ mgbanwe. Ya mere, ugbu a bụ oge ijide otu a site na ụzọ ndị ọzọ. Idetu leta a na ikesa ya site n'aju iji kesaa ya ya bu otu uzo. N'otu aka ahụ, ekesara "akwụkwọ akụkọ nke ọzọ" na Liberationbọchị Mgbapụta, nke bụdị mbipụta. Enwere m ezi obi na ndị mmadụ 930 bịanyere aka na akwụkwọ mkpụnyekwara depụtaghachiri akwụkwọ ozi a wee kesara ya ndị ọzọ.
16 May 2020 na 23: 06
Kwere, ugbu a bụ oge n'ezie ịme ihe ma kwalite ya na-arụsi ọrụ ike. Anyị anaghị enweta nke a site na ịzaghachi edemede, mana site na ịgba ndị mmadụ ume n'ezie.
16 May 2020 na 22: 11
Naanị tinye ya ebe a, ị na-anọdụ na chimeric mmetụta gị, mana ị marala nke ahụ. Lee n'okpuru.
Ọzọkwa, Gilead bụ ihe ọzọ ezoro ezo na Hibru. Ọ dị ka ọ pụtara ihe ndị a.
Gilead (bụ onye mepụtara maka nrụpụta, ogwu ahụ Trump chọrọ ka ndị agha wetara nde 300 nke ọgwụ .. Ya mere, ị nọ na lop, n'ihi na ọ nweghị ihe nwalere na ihe ọ bụla, na ebughi ezigbo ebumnuche. Lee aha ụlọ ọrụ. Google sụgharịa na ikwu n’okpuru.
Ogba nke ịgba akaebe aha aha ya na Galeed n'asụsụ Hibru. Ha abụọ na-egosi akara nke ọnọdụ dị n’etiti Jekọb na Leban. Jen 31:47 (abughi inye ndumodu na Bible, kama ka isi akowa)
Pope Francis Encyclical Laudato Si (akwukwo nkuzi) Oku maka igbu mmadu ijeri isii;
Akwukwo ihe omuma di iche-iche site na ibuso nkata ojoo ojoo zutere ya ma o nweghi ike ikwenye ya. Sọdọm, Phedophile, Freemason nke ogo iri atọ. J Edgar Hoover, onye isi FBI.
Alter bụ ebe ha chọrọ ịlụ gị, ọ bụghị ịlụ di.
Yabụ na ọ dị mfe ịhụ etu ndị ahụ jọruru njọ, ma ọ bụrụ na ị ga - akpọ ha nke ahụ.
Isi mmalite theocsark101.
18 May 2020 na 22: 57
Dịka e bipụtara ma kesaa "De Andere Kranr" dị ka akwụkwọ ebipụtara na Netherlands, ebipụtawokwa akwụkwọ akụkọ na Germany nke enwere ike ịgụ ihe mmegide banyere ihe ọhụụ.
Readgbasa ụdị akụkọ a ga - enyere ndị mmadụ aka ịghara inwe nrụgide ndị ọgbọ karịa mgbe ha hụrụ ka o gosipụtara na ha nwere mmetụta dị mma karịa ka ha cheburu na mbụ. N’ezie nke a nwekwara ike ịbụ ọwa maka ijide ndị otu a, mana enwere ihe dị ndụ n’etiti ndị otu na-aba ụba. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ugbu a ịkwalite mbido nke usoro ochichi onye kwuo uche ya n'etiti ọtụtụ mmadụ. Nke a chọrọ onye ọ bụla na-agụ nke a iji detuo leta ahụ ma zigara ya, dịka ọmụmaatụ, adresị 10 nọ na okirikiri gị nke mbụ yana ajụjụ ma ha chọrọ ịnyefe akwụkwọ ozi ahụ. Mgbe nke a mere ọ bụrụ mmụba dị mkpa ịmara mgbanwe / ọzọ dịka ọchịchị onye kwuo uche ya. Iliarmara nke ọma bụ nzọụkwụ mbụ na-ebute ihe ndị mmadụ mere, dị ka ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-agba akaebe.
Chetakwa, agụụ ịlaghachi na nke ochie agakwaghị enwe ike omume naanị n'ihi na sistemụ ahụ enyela ohere ịmegharị ọha mmadụ n'ọnọdụ anyị nọ ugbu a. Yabụ biko wepụ echiche a n’obi gị. Nhọrọ a mere bu inabata ihe ohuru anyi nwere ike ime ugbua ma guo na igwe ekwenti ma obu nakwere uzo ozo ma obu ndi ogba egwu bu 5, 15, 500, 50000 ma obu nde “esi megharia”.
Mee obere ihe taa wee hụ mmadụ ole ị ga - erute. Mee ya maka ọgbọ nke ọdịniihu na ụmụ ọdịniihu ha na ọdịnihu ha !!! Yabụ: https://www.fvvd.nl
20 May 2020 na 14: 50
20 May 2020 na 18: 54
20 May 2020 na 21: 05
20 May 2020 na 22: 26
20 May 2020 na 22: 44
20 May 2020 na 23: 03
21 May 2020 na 09: 01
21 May 2020 na 15: 05
bertusjanssen dere, sị:
21 May 2020 na 15: 06
" Nkwado megide nsogbu gọọmentị Jordie Zwarts na-atụ ụjọ, mana ọ nweghị ihe ọ bụla
Ihe isi ike Trump gosipụtara China bụ mbido ọdịda dollar na ndakpọ akụ na ụba? »
Nleta ha: 2.422.121